Hubris nke Geocentric Marketing | Martech Zone
O doro anya na Copernicus bụ nna nke mbara igwe nke oge a mgbe ọ rụrụ ụka na heliocentrism gbasara ala. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, anyanwụ bụ etiti nke mbara ụwa anyị, ọ bụghị ụwa. Ọ bụ nkwulu na ọ na-emegide ọdịbendị nke ndị ọkà mmụta metụtara okpukpe n'oge ahụ. Ma ọ bụ eziokwu.
Itinye aka na Azụmaahịa, anyị nwere nsogbu taa. Maka ebumnuche ụfọdụ, mgbe ụlọ ọrụ buru ibu, ha na-amalite iche na ha bụ etiti nke usoro azụmahịa anyị. Taa, enwetara m email site na Border on Border Rewards Perks - mmemme ohuru iji webata oke maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ ha nwere ike ịchọrọ ịzụ ahịa na:
Abụ m Ibe ala onye ofufe. Ruo mgbe e mepere Barnes na Noble n'ofe okporo ámá, ana m agakarị Ibe ala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu ụka ọ bụla. Likelọ ahịa ha na-amasị m, egwu ha na-adị ndụ, na kọfị ha. M na-anọ ọtụtụ awa ebe ahụ, na-ezu ike ma na-agụ ihe.
Ala dị ka ihe agbanweela atụmatụ ha na nke a - ikekwe na-anwa ịga isi na isi Amazon. Ihe dị iche na nhazi bụ, n'agbanyeghị. Amazon na-etinye onwe ya mgbe niile dịka onye na-ere ahịa na nke nkesa na-agbanwe ụzọ ụwa si azụ ahịa. Okirikiri mepere ebe a na-ere akwụkwọ.
hubris: oke nganga ma ọ bụ inwe obi ike onwe onye; mpako.
Ekwenyere m n'ezie na nke a bụ mmeghe. Ebe etiti azụmahịa abụghị gburugburu ụlọ ahịa gị, ọ bụ gburugburu ndị ahịa gị. Ọ bụrụ na onye ahịa hụrụ gị dị ka ụlọ ahịa akwụkwọ, gaa n'ihu itinye akụrụngwa ebe ha ga-akwụ gị ụgwọ kachasị. Kinddị echiche a dị egwu ma nwekwaa ike ilekwasị anya na ụlọ ọrụ gị na ọ nwere ikike na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ ihe ọzọ, gaa mee ihe ọzọ!
Agaghị m azụta ụlọ oriri na nkwari akụ ma ọ bụ uwe site na Border! Wardsgwọ ọrụ abaghị uru nye m mgbe ị na-achọ ịmị m, akụkụ anọ, site n'ohere gbara gburugburu.
Tags: alaụgwọ ọrụemail Marketing
Nnukwu nghọta ọzọ Douglas. Echere m otu ihe ahụ mgbe m hụrụ ka ndị mmadụ na-eduzi ọdịnaya ha na mpaghara mpaghara. Ọ dị ka ibili na ihu ụwa niile site na iji igwe okwu ma na-agwa naanị ahịrị mbụ.
Blog zuru ụwa ọnụ, na-a drinkụ mpaghara!
Aga m eji nke ahụ, Dave! Hụrụ ya n'anya!
Dị dịka McDonalds na-eje ozi Lattes, belụsọ na ha bụ burger flavored… lol
Na-ekwu okwu nke… ị hụrụ nke ahụ Kọfị McDonald nwere nyocha dị mma karịa Starbucks?
Naanị chere - Starburgers na-aga. Olile anya na ha adighi kwa ha oku.
Mee 6, 2008 na 5: 04 PM
"Kdị nke McDonalds na-eje ozi Lattes, ọ gwụla ma ha nwere ụtọ burger? Lol"
Hey, na Guatemala, McDonalds nwere "McCafe". Ọ bụ ụlọ dị iche iche agbakwunyere McDonalds, ọ na-agbakwa ọrụ nke ọma. Ọ masịrị ndị mmadụ. Starbucks enweghị ike ime ya 9too dị oke ọnụ, na Guatemala bụ ebe ezigbo kọfị si amalite).
Lee webusaitim ka m weghachite aha gi.